Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir | RayHaber
HomeDegmada Metropolitan Municipality
In gaadiidka magaalooyinka dadweynaha by bandhigid 20 baska korontada ESHOT dhig a horeysay ee Turkey, qayb muhiim ah oo tamar laga Energy Solar ah Plant (GES) waxay bixisaa. 1,38 Megavat oo ku taal xerada ESHOT ee ku taal Buca-Geediz [More ...]
3 Maalinta Diseembar ee Dadka Naafada ah, 61 waxay gaartay tirada dadka haysta Calanka Casaanka ee Izmir. Calanka cas wuxuu metelaa meelaha ay heli karaan muwaadiniinta naafada ah. Sida ugu horeysay oo kaliya hirgeliyo Izmir, Turkey [More ...]
Buca tunnel, oo bixin doona gaadiid aan kala go 'lahayn oo Izmir ku yaal; Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay soo xirtay gacanteeda si ay u joojiso Buca Tunnel, oo kamid ah tiirarka ugu muhiimsan ee mashruuca bixin doona gaadiid aan kala go 'lahayn oo udhaxeeya Buca iyo Bornova. ku saabsan [More ...]
Izmir waxaa lagu soo daray Shabakada Wadada Wadista Wadooyinka ee Yurub; Xiriirka Baaskiilyaasha Yurub ayaa aqbalay codsigii Izmir ee ahaa ku biiritaanka Shabakada Wadada Wadista Wadooyinka ee Yurub. Sayidka Izmir Turkey noqday magaalada ugu horeysay si ay ugu biiraan shabakadda. Bergama iyo Efesos [More ...]